Askari ciidankii Soomaaliyeed ee dagaalkii 1977 lagu waayay kamid ahaa oo nolol lagu helay. – Xeernews24
Askari ciidankii Soomaaliyeed ee dagaalkii 1977 lagu waayay kamid ahaa oo nolol lagu helay.
4. April 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa 40 sano kadib la sheegay inuu noolyahay Cabdiraxmaan Aw-Jibriil Bahdoon oo ka mid aha ciidankii xooga dalka Soomaaliyeed ee dagaalkii 1977 ka qayb galay waxaana la sheegayaa in uu mudadaas gudaha Ethiopia ku noolaa haatana uu ku soo wajahanyahay magaalada Gabiley oo uu ka soo jeedo, wali ma aanaan heli nooca uu mudadaas Ethiopia ugu noolaa waxaase siwayn isu badalay muuqaalkiisa oo kan inoo muuqda ah.
Ehelka Cabdiraxmaan ayaa la sheegaa inay soo dhawayntiisa ku hawaln yihiin aadna loogu farxay inkasta oo aan faahfaahin kale laga haynin meesha uu Cabdiraxmaan mudadaas 40 sano ah Ethiopia kaga noolaa & xaaladiisa caafimaad midan hadana sawirka laga helay waa mid muujina nin dad & dalba tabaya oo rafaad ka muuqdo rabbina khayr badan inuu siiyo ayaynu uga baryaynaa.
Ruuxii aan dhimanin mar uunbaa la arkaa runtiina waa arrin lagu farxo waana dhacdo ruxruxaysa rajo horlehna ku abuuraysa quluubta dad badan oo xubno ehelkooda ah ay gumaysiga Ethiopia ku maqanyihiin geeri & nolol midanana aan lagu sheegi karin, waxaa la aaminsanyahay inay jiraan maxaabiis faro badan oo Soomaalia h in ay gudaha Ethiopia ku maqanyihiin meelo aan la ogayna ay ku niraan kuwaas oo isugu jira maxaabiista 40 ka hor la waayay & kuwo shagaashanaadkii ilaa maanta la qabanayay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/dari.jpg 960 540 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-04 17:36:262018-04-04 17:36:26Askari ciidankii Soomaaliyeed ee dagaalkii 1977 lagu waayay kamid ahaa oo nolol lagu helay.
DAAWO: Ciidamadii hubeysanaa oo Guluf Colaad kaga soo baxay xarunta BFS,Halis... Raashinkii ugu badna Abid oo dad reer Jabuuti ah ugu deeqeen dadka Saylac iyo...